सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने परिपाटीको वकालत गरौं !
शनिबार, २८ जेठ, २०७९
केन्द्र अथवा प्रदेशमा कुनै पनि सांसद मन्त्री हुन नपाउने एजेण्डा बोकेर अग्रसर हुन ढिला भइसक्यो । स्वतन्त्र वा कुनै दलले यसमा अग्रसरता लिए हुने ।
पार्टीको एउटा सांसद मन्त्री भएपछि उसले कमाएको, काम गर्न नसकेको, बिचौलिया पोस्दै आफू अकुत कमाउँदै गरेको पक्ष पनि विरोध गर्न नसक्नेहरुको भीड छ । आफ्नै सहकर्मीको विरोध भन्दा बचाउ गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् दलका मान्छेहरु । राम्रो गर्नेलाई खुलेर सहयोग र तारिफको पनि वातावरण छैन ।
सांसद नै मन्त्री हुने प्रणालीले संसद निस्कृय भयो । मन्त्री, संसद र संसदीय समितिहरु प्रति जिम्मेवार भएनन् ।
जनताको सेवा र जिम्मेवारीबोध गर्नबाट चुक्दै गएका सांसदहरुलाई अब जनताले सहने छैनन् । हाइ काढ्दै संसदमा मोबाइलमा घोरिएका वा स्वादहीन प्रस्तुतिमा उत्रेका सांसदहरुबाट आम मानिस बिरक्तिएका छन् । सांसदहरुमा मन्त्री बन्ने लोभ र मन्त्रीहरुको संसदप्रतिको उदासिनताले निराशा चुलिंदैछ ।
संसदमा नभएका तर आफ्नो क्षेत्रका योग्य र विज्ञ सम्मिलित टीम बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्रता दिने परिपाटी बनाउँ । देशको समृद्धिका लागि, सरकार र संसदको सक्रियताका लागि यो एउटा उपाय हुनसक्छ । राजनीतिक दलहरुले बेलैमा यसबारे नसोच्ने हो भने उनीहरुकै महत्व घट्दै जानेछ ।
प्रकाशित: Saturday, June 11, 2022 | 19:49:00 शनिबार, २८ जेठ, २०७९
मुशरफ र कटवाल !
जनरल परभेज मुशरफ र महारथी रुक्माङ्गद कटवालआफ्नो समयका फुर्तिला, महत्वकांक्षी र टाठा सेनापतिको रुपमा चिनिन्छन्। प्राय: सेनापति र जनरलहरु शान्त र अन्तर्मुखी हुन्छन् तर यी जनरलद्वय...
आखिर बालसुलभ उस्तै त हुँदो रहेछ नि !
चाबहिलकाे राेटी पकाउने पसलमा म खाजाकाे प्रतिक्षामा थिएँ । राेटी पकाउने दिदी निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । त्यति नै बेला तीनजना बाल ग्राहकहरू पसलभित्र पसे । उनीहरू...
'मैले भोट हालेँ '
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले मतदान गरेको फोटो र मतपत्रको तस्वीरसमेत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै लेख्नुभएको छ - गोरखाको पानपा-१ अन्नपूर्ण मावि बूथमा...
‘ओलीले बुद्धिजीवीका गर्भेनाडी पनि छामेका छन्’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पोखरामा बुद्धिजीवीलाई मैले बोलेको त बुझ्ने बुद्धिजीवी थोरै मात्रै छन् कि क्या हो नेपालमा जस्तो लाग्छ । मैले कहाँ...
मतदानका लागि प्रोत्साहित गरौं, योग्य उम्मेदवारको चर्चा गरौं
मतदान गर्ने दिन नजिकिंदैछ । नागरिकहरुका लागि यो एउटा उत्सव हो, अवसर हो । हाम्रो मतदानबाट नै जनप्रतिनिधिको छनौट हुनेछ । स्थानीय तहमा हाम्रो जीवन...